Dhaqaalaha cakiran oo aan saameeyn dadyoowga dibadaha u safra - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqaalaha cakiran oo aan saameeyn dadyoowga dibadaha u safra
La daabacay fredag 15 mars 2013 kl 15.29
Dadka Iswedhen waxey maanta geliyaan wax ka badan boqolkii 10-15 dakhligooda dhoofka marka loo barbardhigo tobankii sanno ee la soo dhaafey, ayada oo weliba hada xilli dhaqaalo xumo lagu jiro.
Inkastoo ay dadku ku dhaganyahiin boorsada lacagta oo ay yareeyeen wax iibsigooda ayaa hadana dadku waxey in ka badan intii hore dakhli geliyaan dhofka ay ku tagaan wadamada fog fog, sida laga soo xigtey sadexda shirkadood ee ugu waaweyn dhanka dhoofka, oo ay kamid yahiin Fritidsresor, Apollo iyo Ving.
Lottie Knutsson oo dhanka macluumaadka u qaabilsan Fritidsresor waxey sheegtey in si weyn dadka u daneynayaan dhoofka, waxeyna u sababeysey kuleylaha sommarkii hore oo aan fiicney iyo weliba xiliga qaboobaha oo aad u dheeraa sannadkaan.
- Ka sakow arimaha dhaqaalaha oo arintaan sabab u ah, xilligii kuleylaha sommarkii hore oo aan fiicney iyo weliba xilliga qaboobaha sannadkaan oo aad u dheeraa ayaa baahida dhoofka ee dadka gaarsiyey heer aad iyo aad u sareeya.
Ma qorsheeysanaysaa inaad dibadda u dhooftid fasaxa kuleeylaha?
Weli ma go'aansan
Fikrad kama qabo